Welcome to cohealth - Somali - cohealth - Community Health Service
Home / Who we are / Welcome to cohealth / Welcome to cohealth – Somali
Cinwaanka bogga: Ku soo dhawaw cohealth
Waxaad naga filayso – Xuquuqdaada
Helitaanka: Waxaad heli karta si wax looga qabto baahiyahaaga daryeelka caafimaadka.
Ammaanka: Waxaad filan kartaa inaad hesho adeegyo caafimaad oo amaan iyo tayo sare leh oo lagu bixiyo daryeel xirfadeed, xirfad iyo karti.
Ixtiraamka: Daryeelka la bixiyo wuxuu muujinayaa ixtiraamka ll hayo adiga iyo dhaqankaaga, caqiidadaada, qiyamkaaga, shakhsiyadaada, jinsigaaaga, jihada galmadaada, muuqaalkaaga iyo aqoonsigaaga. Waxaad usoo wadan kartaa qof taageere ah (saaxiib, xubin qoyska ka mid ah) markaad imaanayso cohealth.
Wada-hadalka: Waxaad filan kartaa inaad hesho wargalin furan, waqtiyeysan oo kugugu habboon kuna saabsan daryeelkaaga caafimaad si aad fahmi karto, oo ay ku jiraan macluumaadka adeegyada, qorsheynta adeegga, ikhtiyaarka daaweynta, iyo kharashyada. Waxaad isticmaali kartaa turjumaan haddii loo baahdo.
Ka qaybgalka: Waxaad ku biiri kartaa go'aan sameynta iyo khiyaarada ku saabsan daryeelkaaga iyo qorsheynta adeegga caafimaadkaaga.
Waxa aan kaa fileyno – waajibaadkaaga
Ixtiraamka: Waxaa muhiim ah inaad ixtiraam umuujiso dhammaan dadka iyo hantida adeegyada iyadoon loo eegin xaaladda bulshadeed, aqoonsiga jinsiga, cunsurka, itijaaha galmada, diinta, citiqaadka siyaasadeed, xannuunka maskaxda ama wixii shuruudo helitaan ah.
Wada-hadalka: Inaad na siiso macluumaad run ah oo sax ah si aan kuu caawino iyo inaad noo sheegto haddii aadan ballanta imaan karin (ugu yaraan 24 saac oo ogeysiin ah)
Gaarnimada: Waxaan kaa codsanaynaa inaad ixtiraamto gaarnimada dadka kale, oo ay ka mid yihiin macluumaadka looga wada hadlo barnaamijyada kooxda.
Ammaanka: Waxaanu kaa rajeyneynaa inaad u dhaqanto hab macquul ah si adiga iyo dadka kaleba ay u nabdoonaadaan markay na soo booqanayaan ama markaad la joogtid shaqaalahayaga.
Waxaad ku soo-dhawaataa
Inaad adeegsato turjumaan
Si aad u hesho Turjumaanka lacag la’aanta ah waxaad wici kartaa 131 450 oo waydiisan kartaa inay naga soo wacaan:
Wixii wax-weydiin ah ee ku saabsan adeegyada caafimaadka dhimirka, ka wac – 9448 6314
Waxaad dooran kartaa in xubin qoyskaaga ah ama saaxiib ay ku soo-raacdo markaad imaanayso adeegga Cohealth. Adeegyada kale ee qareenka rasmiga ah ayaa kaa caawin ikara nay ku taageeraan ama haddii aad rabto, anaga nagala hadal inaan ku matalno.
Guddoomiyaha Cabashooyinka Caafimaadka
Guddoomiyaha Cabashooyinka Caafimaadka Dhimirka
Guddoomiyaha Adeegyada Iinta
Guddiga Fursadaha Loo-siman yahay iyo Xuquuqda Aadanaha ee Victoria
welcome to cohealth PDF Soomaali